पञ्चपुरीमा १५ करोडको खानेपानी आयोजना | गृहपृष्ठ
Home समाचार पञ्चपुरीमा १५ करोडको खानेपानी आयोजना
पञ्चपुरीमा १५ करोडको खानेपानी आयोजना
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा रू. १५ करोड लगानीको खानेपानी आयोजना सञ्चालन हुने भएको छ । बाबियाचौर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले तेस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजनामार्फत घर घरमा धारा जडान गरी सुविधा दिन लागेको हो । अहिलेसम्म पञ्चपुरीका बासिन्दाले खानेपानीको सहज सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
२०४० सालमा स्व. महेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले खानेपानीको उपभोक्ता समितिमार्फत कामको शुरुआत गरेका थिए । तर, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । द्वन्द्वकालको समयमा खानेपानीको ठूलो समस्या खेप्नुपरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । पाइपलाइन काटिएकाले आयोजना अघि बढ्न सकेन ।
पर्याप्त पानी नहुँदा विद्यालयमा पिउने पानीका साथै शौचालयको प्रयोगमा समस्या हुँदै आएको छ । आयोजनाको सेवाक्षेत्रभित्र पञ्चपुरी नगरपालिकाका वडा नं ५ र ६ का करीब १ हजार ४ सय घरधुरी छन् । देशभरका १३ ओटा आयोजनामध्ये स्वीकृत भएको यस आयोजनाको कुल लागत १५ करोड ६२ लाख २२ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ छ । चन्द्रा एण्ड वसन्त जेभी प्रेरणाले जिम्मा लिएको काम निर्धारित समयअघि नै सम्पन्न हुने बताइएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्षसम्म आयोजनाले नै अनुगमन गर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जीवन ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
२०७३ कात्तिकदेखि शुरू भएको आयोजनाको सम्झौता अवधि १८ महीनाको छ । आयोजनाका लागि नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत, नगरपालिकाको २५ प्रतिशत र समूह तथा उपभोक्ताको ५ प्रतिशत लगानी भएको छ ।
आयोजनासँगै सरसफाइ अभियान पनि सञ्चालन गरिने भएको छ । अहिलेसम्म विपन्न परिवारका ४ सय १० घरधुरीलाई १० हजारका दरले चर्पी निर्माणमा सहयोग, अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण, कार्यालयको पाँच कोठाको भवन निर्माण, ४ सय ६० घनमिटरको तीनओटा ट्याङ्की निर्माण भएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी पाइपलाइन व्यवस्थापनदेखि धारा जडानको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धारा जडानका लागि प्रत्येक घरधुरीले १५ हजारका दरले धरौटी रकम जम्मा गरेका छन् । उक्त धरौटी रकमबाट २३ मिटर धारा जडानका लागि पाइपलाइन विस्तार र जडान सामग्री आयोजना आफैले व्यवस्थापन गर्ने समितिले जानकारी दिएको छ ।
आयोजना सञ्चालित सेवाक्षेत्रलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउन फोहोर व्यवस्थापन र चर्पीबाट निस्कने मललाई कृषिक्षेत्रमा प्रयोग गरी मल बनाउने प्रविधि बनाइएको समितिका सचिव यामलाल बास्तोलाले जानकारी दिए । देशभरकै १३ ओटा आयोजनामध्ये नमूना बनाउने उद्देश्यले काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
आफ्नो नगर र वडाहरूलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त र स्वच्छ पञ्चपुरी बनाउन नगरपालिकाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए । आगामी योजनामा पनि खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए ।